हाइकु रसिलो र चोटिलो विधा हो- इरान राई हाइकुकार - Naya Online
हाइकु रसिलो र चोटिलो विधा हो- इरान राई हाइकुकार
बुधबार, पुस ९, २०७६ (December 25th, 2019 at 2:27pm ) अन्तर्वार्ता, साहित्य
२०२५ सालमा भोजपुर जिल्लाको दिल्पामा जन्म भइ मोरङको बेलबारीमा रहेर साहित्य साधनामा समर्पित इरान राई प्रयोगवादी साहित्यकारको रुपमा स्थापित छन् । उनको अगुवाईमा बेलबारीमा ठूलठूला साहित्यिक महोत्सवहरूको आयोजना हुने गर्दछ । विषेश गरी छोटा खाले श्रृजना गर्न रुचाउने राई हाइकुमा अब्बल मानिन्छन् । गत कात्तिक २३ गते पूर्वाञ्चल हाईकु संघले सम्बध सुत्र संयुक्त हाइकु संग्रह विमोचन पश्चात पुनः एकपटक हाइकुले छलाङ मारेको महसुस गरिएको छ । जसको श्रेय इरान राई स्वयंलाई जान्छ । झण्डा कविताको प्रर्वतक समेत रहेका इरान राईका दहिचिउरे, जिउँदो लास, संकटकाल लगायतका हाइुकु संग्रह प्रकाशित छन् । राजनीतिमा समेत सक्रिय उनी साहित्य समाज सापेक्ष हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । उनै प्रयोगवादी साहित्यकार इरान राईसँग शब्दालयले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ
सामान्य दैनिकी छ । शिक्षण, समाजसेवा, साहित्य तथा साहित्यिक पत्रकारिता आदि, भनौं ।
धेरथोर राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ , लेखन र साहित्य एक–अर्कामा परिपुरक हो ?
साहित्य र राजनीति एकार्काका अभिन्न अङ्ग हुन् । साहित्यभित्र विचार, सिर्जनशीलता र वृहत्तर ज्ञान हुन्छ जुन राजनीतिमा अपरिहार्य छन् । विचारविनाको साहित्य, कला केवल मनोरञ्जनात्मक हुन सक्छन् । वैचारिकतासहितको साहित्यले चाहिँ समाजलाई मार्गदर्शन पनि गराउँदछ ।
तपाइँलाई प्रयोगवादी लेखकको रुपमा चिनिन्छ , कुनै नयाँ प्रयोगाको तयारीमा हुनुहुनछ की ?
साथीहरूसँग मिलेर नयाँ साइजमा एउटा हाइकु संग्रहको प्रकाशन तथा साहित्यलाई प्रधानता दिएर
केही काम गरिँदै छ भन्न सकिन्छ ।
तपाईँ हाइकुमा दख्खल राख्नुहुन्छ, यो कस्तो विधा विधा हो ?
हाइकु ५, ७, ५ गरी १७ अक्षर भएको तीन हरफे छोटो तर गहन कविता हो । यसको उत्पत्ती चीनबाट जापान हुँदै भयो । कतिपयले यसलाई जापानी लघु कविता भन्दछन् । यसमा प्रकृति–वर्णन पाइन्छ । नेपाली हाइकुहरू चाहिँ व्यंग्य आदि विषयमा पनि प्रवेश गरेको छ । यो एक रसिलो र चोटिलो विधा हो ।
पछिल्लो समयको हाइकुहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि लेखिएको हो कि जस्तो पनि छ नी ?
पक्कै पनि ! पहिलो कुरा हाइकुलाई ख्याल–ख्याल सम्झनुहुदैन । नजानेर हामी त्यसो गर्छौं भने अग्रज र विज्ञसँग सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्नु प¥यो । देश काल र परिस्थितिअनुसार फरक हुनु समान्य हो तर संरचना नै भत्किने गरि त लेख्नु भएन नि । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भेटिने हाइकुहरू हलुका सम्म त ठिकै हो कामै नलाग्ने पनि छन् । हाइकुमाथि अध्ययन गरेर लेख्दा राम्रो हाइकु लेखिन्छ भन्ने लाग्छ । र हाइकुको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । हाइकु रसिलो चोटिलो हुनुपर्छ तर रहरमा मात्रै लेखियो भने बेस्वादिलो हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवारी को त ? त्यसैले हाइकु लेखनमा जिम्मेवार पनि बनौं ।
नयाँ कृतिहरूको कुनै तयारी छ कि ?
अबको दुईवर्ष भित्र हाइकु संग्रह लगायत केही पुस्तकहरू ल्याउने तयारीमा छु ।
तपाइँ दिग्गज व्यक्तिको रुपमा चिनिनुहुन्छ , नयाँ पिँढीका सर्जकहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
नयाँ साथीहरूलाई पुस्तकलगायतका औपचारिक सामग्रीहरूका साथै प्रकृति र समाज पनि पढ्नुहोस् । रचना र कृतिले सकिन्छ समाजलाई डोर्‍याउनुहोस् , नत्र कम्तिमा समाजबारे बोलोस् ।